LG V30 သည် LG ၏ OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည် Androidsis
LG သည်သူ၏စမတ်ဖုန်းအားလုံးတွင် LCD panel များကိုအသုံးပြုသောထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုဖန်သားပြင်များသည် Samsung ၏မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်အသုံးပြုသော AMOLED နည်းပညာနှင့်မယှဉ်နိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီကနောက်ဆုံးသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ Galaxy S နှင့် Note.
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုရှိစေရန်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်တွင် OLED မျက်နှာပြင်ဖြင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များသည်မကြာသေးမီက ၀ က်ဘ်ပေါ်တယ် The Investor နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ LG သည် OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သော LG V30 ကိုထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်နေသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အကယ်၍ အားလုံးသည်အစီအစဉ်အရသွားလျှင်၊ LG က G7, 2018 အတွက်စီစဉ်ထား, တူညီတဲ့မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားထည့်သွင်းနိုင်ဘူး။
LG ၏အစီအစဉ်၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာနောင်တွင် Apple iPhone များတွင်အသုံးပြုရန် OLED display များကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးမှုမှာ V30 ကိုဤကဲ့သို့သော display အမျိုးအစားဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မည်မျှထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူများသည်ကိရိယာအသစ်သို့တုံ့ပြန်ပုံကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
LG V30 တွင် OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်ပရိုဆက်ဆာကိုလည်းထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည် Snapdragon 835, 6GB RAM အထိ၊ နောက်ဘက်ကင်မရာ (၎င်းသည်ရှေ့ကင်မရာနှစ်မျိုးဖြင့်လာနိုင်သည်ဟုကောလဟာလများတောင်မှပြောနိုင်သည်။ ) ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အန်နာလော့အသံပြောင်းစက်နှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ မည်သူမျှမမှတ်မိပါကယခင်မော်ဒယ် LG V20 သည်ဂီတပရိတ်သတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် \_ t DAC သို့မဟုတ် Analog ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းစက်.
ယေဘုယျအားဖြင့် LG V30 သည် high-end စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်အချက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းအထူးသဖြင့်လာမည့်ပြိုင်ဘက် Galaxy Note ကို 8.
LG V30 အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤအခန်းတွင်ပင်ဖော်ပြပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG V30 သည် LG ၏ OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
LG က Flex II ကိုကိုင်လိုက်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ LG G Flex ကမသယ်နိုင်ခဲ့လို့လား။
Samsung Pay ကိုယူကေတွင်ရနိုင်သည်